Sawirro: Axmed C/salaan oo is-baheysi culus ka sammeystay siyaasiyiinta ugu caansan HAWIYE - Caasimada Online
Home Warar Sawirro: Axmed C/salaan oo is-baheysi culus ka sammeystay siyaasiyiinta ugu caansan HAWIYE
Sawirro: Axmed C/salaan oo is-baheysi culus ka sammeystay siyaasiyiinta ugu caansan HAWIYE
Muqdisho (Caasimada Online) – Waxaa Hotelka SYL ee Magaalada Muqdisho lagu qabtay Munaasabad balaaran oo lagu soo dhaweynayay siyaasiga caanka ah Danjire Axmed Cabdisalaan Xaaji Aadan oo dhowaan shaaciyay inuu yahay musharax u taagan xilka Madaxweynaha Maamulka Gobollada Mudug iyo Galgaduud.
Munaasabada oo aheyd mid si heer sare ah loo soo agaasimey Danjire Axmed Cabdisalaan ku muujiyay cududiisa siyaasadeed, iyadoo ay ka soo qeyb galeen, Ra’iisul Wasaarayaal hore , Wasiiro , Wasiiro hore, Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka Dowlada Soomaaliya, Siyaasiyiin Saraakiil Ciidan, Bulshada Rayidka, Odayaal Dhaqmeed, Aqoonyahano, Dhalinyaro, iyo Haween.
Munaasabadda ayaa waxaa ugu horeyn lagu soo bandhigay Taariikhda Danjire Axmed Cabdisalaan, iyadoo laga sheegay waxqabadkiisa dhinacyada dib u heshiisiinta, xilalkii uu ka soo qabtay dowladihii KMG iyo kaalintiisa siyaasadeed oo lagu tilmaamay mid mar kasta muuqatay.
Danjire Axmed Cabdisalaan Musharaxa Madaxweynaha Gobollada Mudug iyo Galgadiuud ee Soomaaliya Danjire Axmed Cabdssalaan Xaaji Aadan ayaa sheegay in hadii uu guuleysto inuu ka shaqeyn doono nabada iyo horumarka dadka ku dhaqan Gobolada Dhaxe.
Danjire Axmed Cabdisalaan ayaa tilmaamay in Musharaxnimadiisa ay ku dhalisay Cadaadis uga yimid Bulshada ku nool Gobollada Dhexe, waxaana uu sheegey in uu doonayo sidii uu u badbaadin lahaa bulshada ku dhaqan Gobollada Dhaxe, isla markaana uu ku hogaamin doonotubta toosan, waxa uuna ka codsaday in dadka ku dhaqan Gobolada Dhaxe in ay ku taageeraan Musharaxnimadiisa.
Mar uu ka hadlayay shirka ka socda Cadaado ayaa waxaa uu ka digay in dowladda ay fara geliso, isla markaana wax aysan raali ka aheyn dadka deegaanka la sameeyo, waxaana uu xusay in rabitaanka dadka uu yahay sidii maamul ay u dhan yihiin u sameysan lahaayeen.
Cabdulaahi Goodax Bare oo horay u noqdey Wasiirka arrimaha Gudaha oo ka hadlay Munaasabada ayaa sheegay inay soo dhaweynayaan in Axmed Cabdisalaan uu isku soo sharaxo Madaxweynaha Maamulka Gobolada Dhaxe, waxa uuna tilmaamay in Danjire Axmed Cabdisalaan uu yahay shaqsi karti badan leh uu hubo in uu ka soo bixi karo howsha adag ee hortaala hadii uu guuleysto.
Ugaas Cabdi Daahir oo isna ka hadlay Munaasbada lagu soo dhaweenayay Musharaxa Madaxweyne ayaa sheegay in Axmed Cabdisalaan uu yahay Siyaasi Firfircoon oo jecel Dowladnimada iyo Qaranimada Soomaaliya, waxa uuna ugu baaqay Bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan Bulshada dagan Gobollada Dhexe in garab ku siiyaan sidii uu Danjire Axmed Cabdisalaan ku gaari lahaa himiladiisa uuna u noqon lahaa Mustaqbalka Madaxweynaha Gobollada Dhaxe iyo kan Soomaali weyn intaba.
Cabdiwaaxid Axmed Cilmi Goonjeex oo Mar soo noqdey Ra’iiusl Wasaare ku xigeen oo ka hadlay Munaasabdaas ayaa sheegey in dadka ku nool Gobolada Dhexe ay wax yaabo badan ku wanaagsan yihiin, isagoo xusay in maanta looga fadhiyo in ay dhistaan maamul loo dhan yahay maadaama Dadkaas ay baahi weyn u qabaan Mamul loo mideysan yahay.
Nabadoon C/llaahi Geeddi Shadoor oo ka hadlay munaasabad ayaa sheegay in wixii xoog ah ay isugu geyn taageerada Danjire Axmed Cabdisalaan, isagoo ugu baaqay bulshada Gobollada Dhexe inay doortaan shaqsigii samata bixin lahaa.
Xubnihii kale ee halkaas ka hadlay waxaa ka mid ahaa Xildhibaanad Khadiijo Maxamed Diiriye oo tiri “ Dad baa qaba in Hadii Muqdisho ay Hagaagto in Dalka intiisa kale uu hagaagayo , laakiin, Aniga taas waan ka duwanahay waxaan aaminsanahay in Hadii Gobolada Dhexe ay hagaagaan dalka oo dhan uu hagaagayo , waxaana Bulshada ku nool Goboldaas ku tirtirsiinayaa in ay doortaan Madaxweyne Danjire Axmed Cabdisalaan.
Waxa kale oo goobta ka hadlay Ra’iisul Wasarihii hore ee Soomaaliya Nuur Xasan Xuseen (Nuur-Cadde) waxaana uu ku dheeraaday sidii ay u soo wada shaqqeeyeen isaga iyo Danjire Axmed Cabdisalaan iyo inuu ma’suul uga ahaa wax alaale iyo wixii dib-u-heshiisiin ah oo ay qabatay Xukuumadiisii, waxa uu xusay in danjire Axmed Cabdisalaan mudan yahay in hada wixii ka danbeeya la yiraahdo Madaxwayanaha Gobollada Dhexe.
Ra’iisul Wasaarihii hore ee Somaaliya Cali Maxamed Geeddi waxaana hoosta ka xariiqay in dhamaan dadka ka soo qeyb galay munaasabadan ay qabiil walba ka socdaan, ayna muujineyso taageerada uu guud ahaan dadka Soomaaliyeed ka heysto Danjire Axmed Cabdisalaan.
“Hadii dadka Gobolada Dhexe lagu tilmaamey dad aqli badan oo dadka si wanaagsan u Sooraa maanta ayaa la kala ogaan doonaa waxa ay halkaa ka soo saaraan”.
Waxaa uu sheegay in Danjire Axmed Cabdisalaan uu mudan yahay inuu noqdo Madaxwaynaha Gobollada Dhexe isagoo u soo jeediyey Bulshada ku nool Goboladaas in ay Doortaan Musharax Axmed Cabdisalaan oo uu sheegey in uu yahay Shaqsi buuxin kara booskaas.
Munaasabadan ayaa ah tii labaad oo uu Danjire Axmed Cabdisalaan ku shaaciyo musharaxnimadii Gobollada Dhexe, inkastoo munaasabadan ay ka ballaartay tii hore, maadaama Munaasabada ay ka soo qeyb galeen siyaasiyiinta ugu saameynta badan dalka oo dhamaan taageero u muujiyay.